Biswas – Page 2
Articles by Biswas
January 16, 2020 Biswas 0
विश्वास दीप तिगेला, नेपालका विभिन्न प्रदेशहरु मध्ये सबैभन्दा सम्वेदनशील क्षेत्र हो लिम्बुवान दाबी गरिएको ईलाका । विशाल नेपालमा लिम्बुवान जोडिएको इतिहास पनि अन्य राज्य, प्रदेशको भन्दा भिन्न छ लिम्बुवानको । सबैभन्दा पछाडी नेपालमा सहराज्यको रुपमा जोडिएको भूमिको नाम पनि हो लिम्वुवान । धेरै नेपालीलाई थाह छ, विशेष अवस्थाबाट मात्र तत्कालिन लिम्बुवान भूमि नेपालको गणराज्यको रुपमा आएको हो । […]
January 7, 2020 Biswas 0
सिधा रेखा कोरे झै गाडीका बाटाहरु छन तर गुड्ने गाडिहरु छैनन । शहर छ, वस सेवा छैन । रेलको लिग छ, यात्रु बोक्ने रेल छैन । कारहरु छन तर कारको अगाडि नम्बर छैन । मैदा घुलो जस्तै सुख्खा हिँउहरु छन तर पग्लिएर चिप्लिने खालका ठाँउहरु छैनन् । बाहिरको तापक्रम माईनस ३६ डिग्री छ घट्ने होइन अझ बढने संकेत […]
December 23, 2019 Biswas 0
(विश्व भुटानी साहित्यिक संगठन र भुटानी समाज न्यूजिल्याण्डद्धारा आयोजित चौथो बृहत अन्तर्राष्ट्रिय सृजनात्मक अनुष्ठान २१, २२ र २३ डिसेम्बर २०१९, पामिस्टन नर्थ, न्यूजिल्याण्डमा प्रस्तुत गर्न विश्वास दीप तिगेलाद्धारा तयार पारिएको कार्यपत्र)
November 6, 2019 Biswas 0
फ्रान्सको कलाई इमिग्रेसनको सपिङ सेन्टरले युके फर्कने सबैलाई एकएक बोतल वाईन निशुल्क उपहार हातहातमा दिएर पठायो । बढो गजब ! ससुराली गएर वा नातागोताको घरमा निस्कन्दा कोसेली बोकाई पठाए झै निशुल्क दिइएको वाईनको बोतल संगै धेरै कुराहरु पनि आए । पाहुना सम्झे र विदाईमा सम्मान स्वरुप कोसेली पठाईदिए । फ्रान्समा वाइन बढि र उत्कृष्ट उत्पादन हुन्छ लैजाउ र […]
बेल्जियम इपरका लाखौ युद्धआत्मा, अन्ततः रातो पपीफूल बनेर उठेपछि
November 3, 2019 Biswas 0
आज दिनभर बेल्जियमको मकैबारीमा हिड्ने एउटा सुखद संजोग जुरयो । कतै मकैका बिरुवाहरु झारले छोप्न लागेकाले गोडनु पर्ने देखिन्थ्यो कतै कलिला आलु कोटयाएर तरकारी खान लायक देखिन्थे । खडेरी परेकोले सुख्खाबारी देख्दा पानी परिदिए पनि हुनेथियो लाग्ने । घाम टन्टलापुर छ । सुन्दर उब्जाउशिल माटोको कलकलाउदो खेतीमा दिनै भर मैले मेरो आजीबन किसान बुबाको अनुहार देखे । बेलाबखत […]
कविताराम सरको अन्तिम इच्छापत्रले पोलेको पल ।
स्काईप कल अब मलाई आउने छैन । फेसबुक कल पनि अब हुनेछैन । साहित्यिक चिन्तन र मन्थन पनि अब हामी बीच हुनेछैन । साहित्यको कुराबाट शुरुगरि राजनैतिक सम्मको बहस पनि अब हुनेछैन । दाईको फेसबुक वालमा अब उस्तै रोचक, घोचक र ज्ञानबद्र्धक स्टाटस पनि आउने छैन । कति पीडाहरुलाई लुकाएर वहाको मुहारमा आउने मुस्कान पनि अब सधैलाई लुकेको […]
अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्वत (नियात्रा)
October 31, 2019 Biswas 0
पितापूर्खाको रगत पसिनाले सिंचित मलेशिया भूमिमा हामी नेपालीलाई पक्कै पनि पूर्खाहरुको आर्शिबाद छ झै लाग्छ त्यसैले हुनुपर्छ नेपालीको कमाउने र रमाउने छुट्टै संसार बनेको छ मलेशिया । साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको पनि लगभग डेढदशक नाघेछ । प्रवासी वेदनाका आवाजहरु नामक साहित्यिक पत्रिका (सन् १९९८ देखि २०१०) र अनलाइन नेपाली साहित्य मंच अर्थात नेपालीलिटरेचरडटकम/साहित्यघरडटकम (सन् २००५ देखि हाल […]
सिक्किम, आसाम र नागाल्याण्ड भित्रको संसार, गोर्खाल्याण्ड प्राप्त किन हुदैन?
October 23, 2019 Biswas 0
नेपालको सुदुर पूर्वको काँकडभिट्टा नाकामा तेर्सिएको गेट नजिकै रहेको होटलमा एक रातको बास पछि विहानपंख इतिहासविद् गोपीलाल लिम्बुको घरमा भेटघाट तथा सोधपुछको लागि पुग्यौ । भारतीय सेनामा ३८ बर्ष सेवागरि फर्कनु भएका लिम्बुबाट धेरै इतिहासका कुराहरु ग्रहण गरयौ र केहीकेही इतिहासका कुरालाई वहासंग बुझेपछि सदर गर्यौ, हामीमा भएका अस्पष्टता निदान भयो । निक्कै लामो गफगाफ पछि विदाहुनु अघि […]
भूत (लघु कथा)
October 21, 2019 Biswas 0
अक्टोबरको अन्तिम हप्ता युकेमा चाडै अध्यारो भएको छ । परिक्षाको कारण लाहुरे कुमार घरमा बत्ति बालेर सुनसानमा एक्लै पढिरहेको छ । श्रीमतिको साँझको काम भएकोले चाडै आउनेवाला छैन । त्यसैले बेलुकीको खाना बनाउनु पनि हतार छैन । गहिरिएर अध्ययन गरिरहेको छ । अब झपक्क अध्यारोले छोपेको छ । त्यति नै बेला ढोकामा कसैले ढकढक ढक्ढक्याउछ । कुमारले सोच्यो […]